I-Auto Like Instagram - Like Automatique Instagram
I-Instagram manje isibe yithuluzi elibalulekile ekuthuthukisweni kwemikhiqizo yanamuhla nokukhula kwezithameli. Noma kunjalo, ukuhambisana nokuthunyelwe kwansuku zonke kwe-Instagram nokuzibandakanya kungadla isikhathi futhi kukhathaze. Futhi masingakhohlwa ukuthi umncintiswano onamandla kangakanani ku-Instagram.
Usebenzisa i-bot ngokuthandwa okuzenzakalelayo kwe-Instagram, kufana nokukhokha i-Instagram ukuze i-akhawunti yakho ivele kokuphakelayo kwabantu ngokusebenzisa ukukhangisa okuxhasiwe. Ukuzenzakalela okusebenzayo kokuthandwa nge-bot kungumsebenzi odala amakhulukhulu amathuba e-akhawunti yakho ye-Instagram ukuthi atholakale ngabantu abaningi.
Njengoba i-Instagram ithuthuka ekuboneni ukuxhumana okuzenzakalelayo nezinkampani ezibanikezayo, kufanele uzilungiselele ukuzama izinsizakalo eziningi ukuthola okulungele wena. Kepha ngenhlanhla, nous l’avons fait pour vous et voici notre liste des meilleurs 5 bots Instagram auto like en 2021:
Okusebenza kahle kakhulu i-autolike bot kuze kube manje – Instagram Bot Umlandeli
Okuqinile kakhulu isipiliyoni se-automation – Inflact
Okuncono inani lemali – I-Instaboss
Okuncono iklayenti lensizakalo – I-Instazood
kakhulu onokwethenjelwa – I-Instamb
Kungani Sebenzisa i-Auto Like Bot?
Ukukhulisa i-akhawunti yakho ye-Instagram kungumsebenzi onzima onemisebenzi eminingi eyisicefe eyabelwe yona. Sebenzisa i-bot ukwenza ngokuzenzakalela isenzo esinjengalesi ku-Instagram kuzokusiza ukwandise kakhulu ukuzibandakanya kwakho nokubonakala, futhi uzoba nesikhathi esithe xaxa sokugxila ekuthumeleni okuqukethwe kwekhwalithi kuzithameli zakho.
I-bot enhle efana ne-Instagram enhle izokwandisa ukuthandwa kwakho ku-Instagram futhi iphindaphinde izinga lokukhula kwakho ngokuvumela i-akhawunti yakho esivele ilungile ukuthi ibonwe ngabantu abaningi.
Ungayisetha Kanjani I-Bot Njenge-Auto?
Ukulungiselela i-auto efana ne-Instagram bot, uzodinga ukucacisa ilitshe onentshisekelo kulo. Ungakhomba abantu, ama-hashtag nezindawo, futhi i-bot izosebenzisa ababhalisile bayo ukuthanda okuthunyelwe, okubuye kubhebhezele ukubandakanyeka kokuphindisela ngendlela yokuthandwa. nemvunulo. Ngokwesibonelo, uma ukhomba umuntu, ibhodlela elizenzekelayo lizothanda ngokuzenzakalela okuthunyelwe kwababhalisile bomuntu ohlosiwe.
Lapho wenza okuthandayo ku-Instagram, qiniseka ukuthi uhlela i-auto njenge-bot kahle. Ukuze uqiniseke ukuthi ulisebenzisa ngokugcwele leli thuluzi lokuzenzekelayo ngaphandle kokubeka i-akhawunti yakho ye-Instagram engcupheni, kufanele ukhethe imodyuli efana ne-auto enikezayo :
Isevisi yamakhasimende ethembekile
Isivinini sokuxhumana esizenzakalelayo.
Noma kunjalo, kufanele ukhumbule ukuthi ama-bots ezenzakalelayo e-Instagram ngeke akunikeze ukuthanda okungapheli, kodwa okuqukethwe kwekhwalithi kuzoba. Ukuthandwa okuzenzakalelayo kwe-Instagram kuzokubandakanya kuwe, kepha ikhwalithi yokuqukethwe kwakho kukuwe.
Ama-bots amahle kakhulu okuzenzakalelayo okuthandayo ku-Instagram
Uma ziphathwa ngokunakekelwa, ukuthandwa ukuxhumana okuphephe kakhulu nabalandeli okungenziwa okuzenzakalelayo ku-Instagram. Futhi uma usukulungele ukukhipha ukuthandwa okuzenzakalelayo kwe-Instagram, kuyadingeka ukuzihlomisa nge-Instagram bot enhle kakhulu eyenzelwe lo msebenzi.
Futhi manje, il est temps de regarder de près notre liste des 5 meilleurs bots Instagram auto liker à essayer maintenant.
Intengo: 9,99 EUR par mois
I-Instagram Hyper Follower Bot iyithuluzi elifanele labo abafuna ukwenza ukuthandwa kwe-Instagram kwamanye ama-akhawunti ukukhulisa ukubandakanyeka kokuphindaphinda.
Sithanda iHyper kunamanye ama-bots ngoba ingenza izinto eziningi ongazilindela kusuka ku-Instagram bot esebenzayo. :
Ukuhlanganiswa okuqondiwe okuhlakaniphile kwemiphumela emihle
Amarobhothi ashibhile okuzenzakalelayo emakethe
Ukuphepha okukhulu nommeleli wamahhala kuma-akhawunti womsebenzisi
Izinketho zokuhlunga ezinamandla
Inombolo engenamkhawulo yama-akhawunti we-IG.
Inflact isoftware ezenzakalelayo eyenzelwe abantu abangemuva kwe-Ingramer, nolwazi lwabo luyazikhulumela.
Le bot ye-Instagram automation inakho konke okudingayo ukuqala ukukhulisa i-akhawunti yakho, kusukela ekuzenzekelayo kokuthandwa kuya kuthuluzi lokuhlela, ukuze lonke isu lakho le-Instagram lingahlelwa kusengaphambili.
I-Inflact inikeza ulwazi oluqinile lokuzenzekelayo kubasebenzisi bayo ngezici ezilandelayo :
Ukuqondiswa ngama-hashtag, izindawo namagama abasebenzisi
Izinsimbi zokuhlaziya ezihlakaniphile
Izinsiza eziwusizo ze-Instagram
Isivinini somsebenzi esizala kabusha isimilo sangempela somuntu
Izinketho zokukhokha ze-Modular.
#3 – I-InstaBoss
Intengo: 11.90 EUR par mois
I-Instaboss iyisevisi yokuzenzekelayo yaseFrance ethi inikela ngokubonakala okwengeziwe nokuzibandakanya ngokwenza ngokuzenzakalela ukuthandwa nge-bot yabo. Yini ehlukanisa le nkampani, c’est son engagement à accompagner chacun de ses utilisateurs dans l’acquisition de leurs 1 000 premiers abonnés.
Izici eziyinhloko ze-bot yazo ezenzakalelayo yi :
Owesibili oshibhile emakethe yamarobhothi ohlobo lwezimoto
Izeluleko ezenziwe zaba ngezakho ezinikezwa yisevisi yamakhasimende
Ukuhlonipha imikhawulo ebekwe yi-Instagram
Intengo: 13 EUR par mois
I-Instazood ingomunye wamaphayona emakethe ye-Instagram bot futhi yaziwa ngokusebenza kwayo kwamakhasimende okusheshayo nokusheshayo..
Izici zebhokisi labo le-Instagram zilula kakhulu futhi zakudala :
Ijubane elenziwa ngezifiso
I-Instagram bot elungiselelwe ukusebenza ngokukhululekile kuwo wonke amadivayisi eselula
Izihlungi nezinketho zokwenza ngokwezifiso ukwenza ukuthandwa kusebenze.
#5 – I-Instamb
Isizathu esenza sibheke i-Instamber njengethembeke kakhulu ukuthi benze amagxathu amakhulu ekuzivumelaneni nezinguquko zakamuva kuma-algorithms e-Instagram..
Izici eziyinhloko ezitholakala ngaleli robhothi othomathikhi:
Izinketho zokukhomba ezithuthukisiwe
Imenenja ye-akhawunti ukugcina i-automation yakho ingaphakathi kwemikhawulo
Izilungiselelo zomsebenzi wejubane ezizenzakalelayo nokuhlunga okuthuthukile
I-algorithm eyenziwe kabusha
Ama-akhawunti amaningi kungenzeka.
Konke mayelana nokuphuma kwe-Instagram
IGTV Shopping isiyatholakala ku-Instagram
Article précédentKonke mayelana nokuphuma kwe-Instagram